Blockchain News 09.06.2018 - Blockchain News
Korean ọchịchị chọta dịghị iwu na-akwadoghị ọrụ Bithumb nchoputa
The nchoputa n'ime ndị kasị ibu mgbanwe ke South Korea, Bithumb site na otutu South Korean ọchịchị na-ekpughe na e nweghị mmehie na ụlọ ọrụ si n'ihi, n'agbanyeghị a nnukwu tax ụgwọ.
Bithumb ugbu a nwere a tax ụgwọ of 30 ijeri merie akwụ, nke na-akarị Olee ihe enyemaka $28 nde.
A tax iwu na nnukwu bụ nnọọ ihe ijuanya, dị ka ikpo okwu ebubo nkezi ụgwọ nke 0.3% na Olee ihe enyemaka $250 nde ke azụmahịa kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na Bithumb ebubo a ukwuu maka trades, na ga-apụta na ndị ụlọ ọrụ na-eme ka a ebu ọnụ ọgụgụ nke Olee ihe enyemaka $750,000 kwa ụbọchị, nke na-akarị ihe fọrọ nke nta $274 nde kwa afọ.
Tags: bitcoin, ozi
Ontology ebupụta ilekota Accelerator - Ontology Olympus Accelerator OOA
Ontology, a new high-performance public multi-chain project and a distributed trust collaboration platform, mara ọkwa Ontology Olympus Accelerator (OOA).
Ihe omume na-agwa technology na ngwaahịa ndị ọkachamara gafee ubi imekota na ndi oru itumgbere ahia na-ewu ọhụrụ ekesa azụmahịa ngwa dabeere Ontology ọzọ-ọgbọ ọha yinye akụrụngwa na-ewu ihe na-emeghe-isi iyi, obi meghere emeghe, na collaborative ekesa ntụkwasị obi ilekota.
The Ontology Olympus Accelerator omume ga-enye zuru ezu oru, ahịa, ego, talent, na iwu nnabata support. The Ontology Foundation ga itinye ego dị 1.5 ijeri USD worth of tokens, niile nke ga-eji na-akwado ndị ga-eme n'ọdịnihu nke ẹdude startups na ìgwè họọrọ.
Norwegian Air CEO ẹkedori kaadị mgbanwe
Billionaire Norwegian Air CEO Bjorn Kjos launching a cryptocurrency mgbanwe aha ya bụ Norwegian Block Exchange, na na a yiri leta Norwegian Air ugbu a na-anabata cryptocurrency ugwo.
tupu mgbe, ụlọ ọrụ NBX Exchange, akpọlitela $250,000 na a fundraising gburugburu.
The CEO wee gaa n'ihu ịsị "Anyị na-achọ ihe ndị na-mfe n'ọtụtụ… enwe a cryptocurrency ugwo nhọrọ ke ụgbọelu, Anyị na-ahụ na e nwere mkpa maka a oké njọ ahịa ebe ị pụrụ ịzụta na-ere cryptocurrencies. "
NBX nwere oké ọchịchọ atụmatụ na ihe mgbaru ọsọ nke rivaling mgbanwe dị ka GDAX na Kraken
Kraken Daily Market Report maka 08.06.2018
$88.8M ahịa gafee ahịa niile taa
Litecoin (LTC) bụ c ...
Na mba dị iche iche, bitcoin ahịa nwere ike ịdị iche
Mere dị iche iche cou ...
Olee otú otu ịkọ omume nke na ọnụego nke a cryptocurrency na okwu nke ọnụ ọgụgụ nke iwu p ...
Gịnị bụ ọdịdị o ...
ngọngọ yinyekaadịmgbanweozin'elu ikpo okwu
Previous Post:Blockchain News 08.06.2018
Next Post:Blockchain News 10.06.2018
June 13, 2018 na 5:16 PM